Firaisankina Manerantany Ho an’ireo Nanjavona Tamin’ny Voromby Malayziana MH370 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Marsa 2014 23:50 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, বাংলা, polski, 繁體中文, 简体中文, English
Sarintanin'ny fironana manerantany miresaka ny MH370 ao amin'ny Twitter
Efa ho lasa izao ny roa herinandro nanjavonan'ny Malaysian Airlines nandritra ny sidina niainga avy any Kuala Lumpur nankany Beijing saingy mbola tsy afa-nanondro ny toerana misy azy sy ireo mpandeha 239 tao aminy ny manampahefana. Nitarina ny fikarohana ny sidina MH370 rehefa nandamoka ny fikarohana azy teo amin'ny faritra farany nahitana ny diany tamin'ny radar.
Noho ny tsy fisian'ny fampafantarana ofisialy momba izay nanjò ny MH370, maro ny olona no lasa mitodika amin'ireo tombatombana sy ireo petrakevitra tsy mampino loatra mba hitadiavana ny antony nahatonga ny fanjavonan'ny voromby feno misitery ity. Manampy trotraka amin'ny fahorian'ny havana sy naman'ireo mpandehan'ny MH370 ny fandisoam-baovao. Naneho ny fahatezerany sy ny sorisoriny noho ny tsy fisian'ny vaovao tsara momba ny fanjavonan'ny voromby ny havana sasantsasany.
Ny hany mampisy aingam-panahy sy fankaherezana azy ireo hiavotra ao amin'ity krizy ity angamba dia ny fanehoam-piraisankina sy ny hafatra fanohanana avy amin'ny lafy valon'izao tontolo izao.
Mankasitraka ireo firenena rehetra nanampy an'i Malayzia tamin'ny fikarohana ny MH370 ny praiminisitra Najib Razak:
Androany, firenena 14, sambo 43 sy voromby 58 no miditra an-tsehatra amin'ny fikarohana. Te-hisaotra ireo governemanta rehetra aho noho ny fanampiany tao anatin'ny fotoana sarotra.
Nihetsi-po tamin'ny fanohanana manerantany azon'i Malayzia i Susan Ng A. Suan:
Manohina ny fo tokoa ny mahita firenena sy vahoaka amin'izao tontolo izao, miray hina mampivondrona ny ezaka, manampy amin'ny bemidina fikarohana sy famonjena ny MH370.
Misaotra ireo firenena izay tsy mitsahatra ny manavatsava ny lanitra, ny ranomasina ary ny tany hikarohana ny MH370.
Misaotra ihany koa ireo olona 2,3 tapitrisa manerantany izay mandray anjara mandany ora maro manao savahao avy amin'ny fandinihana ny sarin'ny zanabolana.
Izany no porofon'ny famerenana amin'ny laoniny ny fitokisana amin'ny mahaolombelona
Mpianatra Filipino mandray anjara amin'ny lanonana fiareta-tory (mandrehitra labozia) hanomezam-boninahitra ireo mpandehan'ny MH370. Saripika avy amin'i Kathy Yamzon
Nihetsi-po tamin'ny hafatra Twitter nalefan'ny zanakavavin'ny ny lehiben'ny steward ao amin'ny MH370 ny ekipa anglisy Liverpool:
“Dada o, nandresy i Liverpool. Modia an-trano hijery ny lalao ! Tsy mbola diso lalao mihitsy ianao hatramin'izay. Sambany izao. :’) “
Nanohina ny fonay izao – sioka nalefan'i Maira, zanakavavin'i Andrew Nari, lehiben'ny steward, tamin'ny alahady alina.
Maro ny mpiserasera nampiasa ny diezy #PrayForMH370 ho fanehoa-piraisankina amin'ireo havan'ny mpandeha nanjavona. Nisongadina avy amin'izany ihany koa fanakaikezana am-po sy ny fiahiana ireo mpandehan'ny MH370 nanjavona. Indreto eto ambany ny sary avy amin'ny firenena maro mampiseho ny fanohanany an'i Malayzia:
Vavaka ho an'i MH370
artistan'ny tora-pasika Sudarshan Patnaik mamarana ny zavakanto amin'ny torapasika ho firariantsoa ny MH370.
Artista Filipina manome voninahitra ireo mpandeha nanjavona tao amin'ny vorombin'i Malayzia Saripikan'i Danny Pata
Fanetsehana ny mpianatra tao amin'ny Oniversiten'i Warwick! mandraisa anjara amin'nyzavatra goavana!
Mivavaka ho anao izao tontolo izao iray manontolo
Setriny Manerantany. Jereo ato amin'ity fampanfantarana an-tsary ity ny fahatongavan'ny rehetra.
Hafatry ny fanantenana sy vavaka ho an'ireo ao amin'ny MH370 sy ireo olon-tiany tao amin'ny seranam-piaramanidin'i Kuala Lumpur